China ICANDELO LOKUGQIBELA LOKUGQIBELA LOKUGQIBELA LOKUGQIBELA LWENKQUBO YOKUPHILA-XYS-CY0815 abavelisi kunye nabathengisi | Xieyanshi
1. Sebenzisa ilaphu lokusula ukucoca umphezulu wepeyinti. Beka isixa esifanelekileyo seCY-0815 kumphezulu wepeyinti. Sebenzisa ivili loboya (ivili lesiponji) ukunxiba i-wax.
2, qala umatshini wokucoca ngevili emhlophe erhabaxa (ivili lesiponji) ukugcina isantya esifanayo, kwaye ngokuthe ngcembe kuvavanyo loxinzelelo, xa i-wax eshinyeneyo yomile ngokuthe ngcembe, ukunciphisa uxinzelelo oluqhubekayo lokucoca, de kube umbala wepeyinti uqaqambile!
3. Emva kokuba iziphene ze-lacquer zigqityiwe, sula intsalela ye-lacquer nge-wiper!
4, emva kokuphela kokuphosa okurhabaxa, kunye ne-XYS CY-0817 ye-wax efanelekileyo yokupeyinta kumphezulu wepeyinti wemikrwelo encinci, amanqaku eringi erhabaxa le-wax kunye nolunye uqweqwe lwe-lacquer ukukhupha, ukunyusa ukukhanya kwepeyinti kunye nokucaca kwe-varnish!
1. Sukuyisebenzisa le mveliso phantsi kwelanga okanye ipeyinti eshushu!
2. Le mveliso inzima kakhulu. Nceda usebenzise isilumkiso ngokubhekisele kwimeko eyiyo yombala wepeyinti kunye nenkqubo ekhuthazwayo yeXYS!
Ithetha ntoni imibala yesinyithi sokucoca isinyithi?
Umbala wekhonkco lokucoca uhlala uhlala uyimveliso yezithako zendalo ezirhabaxa. I-Tripoli powder, eboniswe ngezantsi umzekelo, iyimveliso esirhabaxa ethi kunye nezinye izithako zefomula zivumele ivili lokuloba ukuba lipolishe isinyithi. Ezi zirhabaxa zihlala zinee-pigment kwaye zibangela umbala webha ukuba uthathe ukubonakala kwesirhabaxa.
Kwiimeko apho ukubonakala kombala okufanayo kuneempawu ezahlukileyo ezahlukileyo, uninzi olwenziwe (ngokwethu lubandakanyiwe) lunokongeza i-pigment eyahlukileyo okanye idayi ukunceda ukwahlula iimveliso.
Sebenzisa iRebel Red, iRebel Pro Red, kunye neRebel Pipe Dream Chrome Conditioner ipolishi yentsimbi epholileyo phakathi kokusikwa okukhulu ukunceda ukugcina ukukhanya komgangatho kwizithuthi zakho.
Egqithileyo Ukuthengisa ngokuBanzi ngokuSebenzayo ngokuKhawulezayo kweWax kwimoto-XYS-A2
Okulandelayo: Ukunyamekelwa kweemoto ukuCoca indawo yeesampulu zasimahla-XYS-CY0816